တတ်သိပညာရှင်များ | လွတ်လပ်လှိုင်းမဂ္ဂဇင်း
ပြည်တွင်းမှာ ဘယ်လိုမှ လေ့လာလို့မရနိုင်တဲ့ တိုင်းရင်းသားအရေး၊ ဖက်ဒရယ်ရေး၊ လူ့အခွင့်အရေးတွေကို လေ့လာနိုင်အောင် ပံ့ပိုးပေးခဲ့တယ်… လူငယ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက် အမှားအယွင်းတချို့ရှိခဲ့ပေမဲ့ ကျောင်းသားတပ်မတော်ရဲ့ဖြတ်သန်းမှုဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုသမိုင်းမှာ အရေးပါတဲ့ကဏ္ဍတခုကနေ ပါဝင်ခဲ့တာကို မငြင်းနိုင်ပါဘူး…
ကျနော်တို့ ကြိုက်သည်ဖြစ်စေ၊ မကြိုက်သည်ဖြစ်စေ ဒီလောက် တနိုင်ငံလုံးက ပွဲကြီး ကျင်းပပြီးတော့ ဆိုင်းဘုတ်တွေထူပြီးတော့ ၂၁ ပင်လုံကိုကြိုဆိုပါတယ်လို့ ပြောနေသော်ငြားလည်း ပဋိပက္ခမှာပါဝင်နေသူတွေရဲ့  ၈ဝ% လောက်က ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်ရဲ့  အပြင်မှာဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် ဒါဟာ ပဋိပက္ခလျှော့ချရေးအတွက် အထောက်အကူမဖြစ်ဘူး။ ဒီညီလာခံကြီးပြီးရင် ငြိမ်းချမ်းရေးရတော့မှာပဲဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေဟာလည်း တကယ်တမ်းကျ လက်တွေ့ဖြစ်ဖို့ခဲယဉ်းတယ်။
"One of the intelligence cried" You areapoet? You wrote satire against our government? which material did you use? You used these fingers to criticized us? After that my fingers were stretched upon the concrete, and they proceeded to trample my fingers with jungle boots.